Email Kushambadzira Blog | Peji 2 ye144 Martech Zone
E-mail kushambadzira uye kushambadzira otomatiki zvigadzirwa, mhinduro, maturusi, masevhisi, mazano, uye akanakisa maitiro emabhizinesi kubva kuvanyori ve Martech Zone.
Maitiro ekushambadza Yako Shopify Blog Feed mune Yako Klaviyo Email template
Chishanu, April 8, 2022 Muvhuro, April 11, 2022 Douglas Karr
Isu tinoenderera mberi nekusimudzira uye nekukwirisa yedu Shopify Plus fashoni mutengi email yekushambadzira kuedza kushandisa Klaviyo. Klaviyo ine kubatanidzwa kwakasimba neShopify iyo inogonesa toni ye-e-commerce ine hukama kutaurirana iyo yakafanovakwa uye yakagadzirira kuenda. Zvinoshamisa, kuisa yako Shopify Blog Zvinyorwa muemail HASI imwe yacho, zvakadaro! Kuita kuti zvinhu zvinyanye kuoma… zvinyorwa zvekuvaka iyi email hazvina kurongeka uye hazvitombonyore mupepeti wavo mutsva. Saka, Highbridge
6 Maitiro Akanakisisa Ekuwedzera Iyo Kudzoka pa Investment (ROI) Yenyu Email Kushambadzira
Muvhuro, April 4, 2022 Muvhuro, April 4, 2022 Vladislav Podolyako
Paunenge uchitsvaga nzira yekushambadzira ine yakanyanya kudzikama uye inofanotaura kudzoka pakudyara, iwe hautarisire kupfuura email kushambadzira. Kunze kwekunyatsogona kurongeka, zvakare inokupa iwe kudzosera madhora makumi mana neshanu pamadhora ega ega akashandiswa pamishandirapamwe. Izvi zvinoreva kuti iyo yakaverengerwa ROI yeemail kushambadzira inogona kusvika ingangoita 42%. Mune ino blog positi, isu tichakubatsira iwe kunzwisisa kuti email yako yekushambadzira ROI inoshanda sei - uye maitiro ekuita kuti ishande zvirinani.
Favorite Plugins yeBusiness WordPress Sites
Sebhizinesi, wakadyara toni yenguva, simba, uye mari mukugadzira yakanakisa webhusaiti kana e-commerce saiti. Anenge mabhizinesi ese nevatengesi vanoshanda nesimba kuti vawane vashanyi vatsva kunzvimbo yavo… vanoburitsa mapeji ezvigadzirwa zvakanaka, mapeji ekumhara, zvirimo, nezvimwe. Mushanyi wako asvika nekuti aifunga kuti une mhinduro, zvigadzirwa, kana masevhisi awanga uchitsvaga. nokuti. Kakawanda, kunyange zvakadaro, muenzi iyeye anosvika overenga ose